Is Barbar-dhigga Milatari Ee Labada Kuuriyood Ee Qarka U Saaran In Dagaal Culusi Ka Dhex Qarxo | Salaan Media
Is Barbar-dhigga Milatari Ee Labada Kuuriyood Ee Qarka U Saaran In Dagaal Culusi Ka Dhex Qarxo
Seoul (SM)- Dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Kuuriyada Woqooyi waa laba dal oo cadaawad weyn oo Guun ahi ka dhaxayso. Waxa ay wadaagaan xuduud dhuleed oo dhererkeedu dhan yahay 125km. Goobta Milatari ahaan ciidamadoodu Hubka ugu badan ku ururiyeen ee ay isku horfadhiyaan waa dhul aan ka badnayn 4-kiiloo Mitir balsedhammaan xudduuddda labadan ciidan ee Badda iyo Barrigaba waxa dhooban Ciidamo badan oo labadna dal ah.
Afartaa Kiiloo Mitir waxa lagu tilmaamaa goobta tirada hubka ah ee ugu badan la soo dhoobay ee dunida guudkeeda ku taalla. Afartan Kiiloo Mitir ee kali ah waxa ku sugan Hal Milyan Oo Ciidamo ah oo labada dal ka kala tirsan. Waxa yaalla in ka badan 20-kun oo Madaafiic ah, in ka badan Hal Malyuun oo Miino oo goobtan ku aasan waxaanay goobtanu caasimadda wadanka Woqooyiga Kuuriya ee Pyong Yang u jirtaa 120km, Seoul oo caasimadda Kuuriyada Koonfureed ahna waxa ay u jirtaa 40km oo kali ah.
Macluumaadkii ugu dambeeyey ee sannadlaha ah ee laga soo saaro awoodda Milatari ee labadan dal waxa ay tilmaamaysaa in tiro ahaan ciidamada wadanka Woqooyiga Kuuriya aad uga badan yihiin dhiggooda Koonfurta balse ciidamada Koofurta Kuuriya kaga wanaagsan yihiin dhinaca Tayada hubka Casriga ah, Tababarada Ciidamada ee Casriga ah, Diyaaradaha dagaalka F14 iyo F15 oo Maraykanku u sameeyey. Waxa kale oo Koonfurta Kuuriya leedahay Xidhiidho Qoto dheer oo istaraatiijiyeed oo ay la leedahay dalal badan oo adduunka ah, gaar ahaan kuwooda ugu awood badan maanta halka Woqooyiga Kuuriya dal weyn oo kali ah uu saaxiib u dhaw la leeyahay, kaasi oo ah wadanka Shiinaha oo ay Juquraafi ahaanna aad isugu dhaw yihiin goobt aay dhacaan.
Isbarbar dhigga ciidan ee dhinacyada Badda, Barriga iyo Cirka:
Kuuriyada Koonfureed: Bedka uu ku fadhiyo dhulka Koonfurta Kuuriya waxa uu dhan yahay 97km oo isku wareeg ah. Tirade dadka dalkani waa 50 Milyan oo qof, Ciidamada wadanka Koonfurta Kuuriya waxa ay dhan yihiin 3-milyan iyo 653 kun oo ciidan ah (653ka kun ayaa ah kuwa rasmiga ah ee hawlgala halka 3da Milyan ka yihiin Ciidamada Keydka ah).
Miisaaniyadda wadankan ee dhinaca Ciidamadu waxa ay gaadhay 29-Milyaar oo dollarka Maraykanka ah. Ciidamada wadanka Koonfurta Kuuriya waxa ay leeyihiin in ka badan 190 Markab dagaal, 12 Maraakiibka dagaalka ah ee wax Duqeeya ah, 14 Gujis oo dagaal oo casri ah, 114 Laashashka dagaalka ah ee Casriga ah 10 Laashashka Miinada Badda lagu dhigo ah, 13 Doonyo dagaal ah oo Barrigana ka hawl gali kara haddi ay u soo baxaan.
Woqooyiha Kuuriya: Tirada dadka wadanka Woqooyiga Kuuriya dhan yahay waa 20-Milyan oo qof. Bedka dhulkoodu ku fadhiyaana waa 120km oo isku wareeg ah. Ciidamada wadanka Woqooyiga Kuuriya waxa ay dhan yihiin 114-Milyan iyo 200 oo kun oo askari. (106-Milyan waa ciidamada rasmiga ah ee Rigliga ah halka 8-milyan iyo 200 oo askari ka yihiin ciidamada Keydka ah) oo la adeegsan doono wakhtiga dagaaladu qarxaan.708 Markab dagaal oo ku kacay miisaaniyad dhan 7 Milyaar oo dollar. 3 Maraakiibta diyaaradaha xambaar ah ee wax duqeeya. 70 Gijis oo Hubaysan oo ciidamada qaada, 471 Laash oo kuwa dagaalka ah oo casri ah, 23 Markab oo kuwa Gantaalaha xambaar ah, 273 Doonyaha dagaalka ah oo qaadi kara gantaalada ridada dhexe.
Dhinaca Awoodda Berriga: Kuuriyada Koonfureed waxa ay haysataa 2600 oo Dabbaabadood, 2400 oo gaadhi oo tikniko ah, 52-kun oo gawaadhiga ciidanka qaada ah, 871 diyaardood oo miig ah, 97 Helicopter, 4904 Madfac ridada dhexe ah, 214 Madfac oo sare, 2330 oo ah saldhigyo laga rido madaafiicda, 2000 oo madaafiicda ridada dheer ah oo qaadi kara 576 madax.
Halka ciidamada Woqooyiga Kuuriya ka haystaan: 5400 oo dabbaabadood, 2580 isugu jira Beebeeyo iyo nooc Kaare taariyo leh ah, 38,000 oo Tikniko noocyo kala duwan ah, 1667 Diyaaraood oo miig ah, 237 diyaaradood oo Helicopter dagaal ah, 3500 Madfac, 1600 oo goobo madaafiic ah, 17,000 kun Gantaalo dhexe, 55,000 Madaafiic ridada dheer oo qaadi kara Hubka Nukliyeerka ah oo Qudayn kara Badhtamaha wadanka Maraykanka.